Umaki: Ukwazisa ngomcimbi wokumaketha | Martech Zone
Tag: ukumaketha umcimbi wokwazisa
Uma kukhulunywa ngokukhangisa ngemidiya yezokuxhumana kanye nemicimbi, isifundo sithi: qala ukuyisebenzisa MANJE - kepha qiniseka ukuthi uyalalela ngaphambi kokuthi ugxume. Abasebenzisi bezokuxhumana badlula abasebenzisi be-imeyili emhlabeni jikelele eminyakeni emithathu edlule futhi amanethiwekhi omphakathi akhonjelwa kuphela ukuthi aqhubeke nokukhula. Cabanga ngemithombo yezokuxhumana njengesiteshi sokuxhumana esidlula ithuluzi lokuphromotha noma ukufaka esikhundleni sokukhangisa. Amapulatifomu okuxhumana okukodwa kuya kokuningi awasebenzi kahle. Ngakho-ke impumelelo ezweni lanamuhla ledijithali idinga
NgeSonto, uJanuwari 20, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr